Alteryx: Fitsikilovana momba ny asa fandraharahana sy Analytics stratejika | Martech Zone
Rehefa miresaka momba ny olona Analytics, voafetra amin'ny tranokala foana izy io, angona mahazatra izay mahazatra manerana ny mpivarotra maromaro. Ho an'ireo fikambanana lehibe manana angona data - anisan'izany ny angon-drakitry ny fividianana mpanjifa, angon-drakitra fanisam-bahoaka, angona jeografika, angona media sosialy, sns - ny salanisa Analytics sehatra tsy mandeha. Ity misy resadresaka tsara nifanaovan'i Alteryx sy i Boris Evelson an'i Forrester momba io lohahevitra io:
Alteryx manambatra raharaham-barotra raharaham-barotra sy ny fahaizana mifandray amin'ny datamart lehibe amin'ny zavatra nofaritany fanadihadiana stratejika.
Tamin'ny herinandro lasa teo dia nanana resadresaka nahafinaritra momba ilay lohahevitra niaraka tamin'i Paul Ross, VP momba ny varotra vokatra sy ny indostria ao amin'ny Alteryx aho. Nandritra ny asako taloha momba ny marketing amin'ny tahiry, dia namolavola sy nanangana trano fitehirizana angon-drakitra ho an'ny mpanjifa aho ary nahatakatra ny olana. Indraindray dia maharitra andro maromaro vao manangona terabyte data. Alteryx dia mitantana asa sarotra toa izao amin'ny alàlan'ny sidina, amin'ny alàlan'ny fampiasana ireo haitao farany amin'ny database.
Alteryx dia manambatra ny fiasa rehetra amin'ny fitaovam-pitaterana data sy ny maoderina Analytics ary fitaovana sosialy hanomezana fomba fijery feno ny angon-drakitrao - anisany ny fitrandrahana, ny fanovana ary ny enta-mavesatra (ETL), ny angon-drakitra sy ny adiresy fahadiovana, ny fampidirana ny angon-drakitra ny mpanjifa, ny fanamafisana ny angon-drakitra ary ny fanondroana, ny fanaovana tatitra ary ny fanadihadiana momba ny habaka.
Alteryx: Mila mamakafaka ireo angon-drakitrao miaraka amin'ireo lafin-javatra ivelany misy ifandraisany ianao — toy ny trano, fifaninanana, psychografika, ary toerana misy anao. Izy rehetra dia mitambatra, ireo fahiratan-tsaina ara-barotra mahatalanjona Analytics Omeo anao izay ilainao hisamborana ireo tsena stratejika stratejika, hihoarana ny mpifaninana aminao ary handoa vola bebe kokoa amin'ny orinasanao ankehitriny.
Ary eo no mifanentana i Alteryx. Ny rindrambaiko Alteryx Strategic Analytics dia vahaolana amin'ny birao-amin'ny-rahona feno izay manambatra ny angon-drakitra momba ny orinasa, ny atin'ny indostria ary ny fanodinam-potoana mba hanomezana ny drafitra stratejika izay rehetra ilain'izy ireo amin'ny vahaolana iray mora ampiasaina. Io no loharanom-pahalalana stratejika anao Analytics rindrambaiko, angona ary fanadihadiana, izay manome ny faharanitan-draharaha Analytics mila mandray fanapahan-kevitra matoky tena ianao.
Ny vahaolana Alteryx:
Fanadihadiana ad hoc ao anatin'ny minitra vitsy: Mamolavola sary mihetsika sy famolavolana endrika indray.
Tabilao sy sarintany ifandrimbonana: Mamantatra fifandraisana sy fotoana vaovao.
Fanadihadiana momba ny habaka: Mihady lalindalina kokoa miaraka amin'ny toe-javatra ara-jeografika marina.
Safidy fandefasana tatitra sy fandefasana: Asehoy amin'ny fomba tianao ny fahitana.
Mpanamboatra rindrambaiko: Mamorona sy mizara fampiharana analizy amin'ny mpamosavy drag-and-drop.
App fifanakalozana: Makà fanombohana fitsangatsanganana miaraka amin'ireo rindrambaiko efa namboarina avy amin'ny Alteryx Community.
Tao amin'ny magazay fivarotana sy fantsom-barotra marobe, mpivarotra antsinjarany iray an'ny Alteryx no nampiasa ny Facebook 'Likes' hanatsarana ny famakafakana ny fizarazaran'ny mpanjifa. Amin'ny alàlan'ny Alteryx, ny orinasa dia afaka nampifanaraka ny 'Tiana' tsirairay tao amin'ny pejiny Facebook tamin'ny hetsiky ny mpanjifa tamin'ny fandaharam-pinoany ary namakafaka ny fomba fividianan'ny mpanjifa. Tamin'ny fampiasana ny modeling vinavina, ny fanadihadiana ny habaka (na ny toerana) ary ny angona demografika, ny mpivarotra dia namakafaka ny fifandraisan'ny mpanjifa Facebook sy ny fifandraisana mivantana amin'ny varotra avo lenta amin'ny sehatr'ireo mpanjifa sy sokajy vokatra.
Miaraka amin'ny angona anatiny momba ny mpanjifa na ny varotra ary ny angona demografika ivelany, Alteryx dia manome hery ireo orinasa mba hahafantarana tsara ny fiantraikan'ny ezaka sy fampiasam-bolan'ny media sosialy eo amin'ny fitondran-tenan'ny mpanjifa, ary ny tena zava-dehibe, ny fehiny.
Raha te-hitsapa ny sasany amin'ireo fitaovan'ny Alteryx ianao amin'ny alàlan'ny tranonkala - zahao ny tanany vitsivitsy Analytics mpamosavy azonao ampiasaina maimaim-poana amin'ny azy ireo Alteryx izao tranokala. Mahafinaritra ny mpanara-dia azy ireo ao amin'ny Twitter, mamerina ny lisitr'ireo bitsika havanana amin'ny teny lakile tadiavina, ary koa ny mombamomba ilay mpibitsika. Azonao atao koa ny mametraka adiresy sy karoka Twitter ho an'ny lasibatra fanampiny!
Tags: alteryxetlangona geografikageotargetingtatitraangon-drakitra spacial